Right Click နှိပ်လိုက်တိုင်း Preparing To Install ဆိုတာကြီးပေါ်လာ&#4112 — MYSTERY ZILLION
Right Click နှိပ်လိုက်တိုင်း Preparing To Install ဆိုတာကြီးပေါ်လာ&#4112
စက်မှာ Virus ကိုက်နေတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်... AVG antispyware နဲ့စစ်ကြည့်လိုက်တော့ အကြီးစား လေးကောင်တွေ့လိုက်ရတယ်...။ Anti Virus Programme နဲ့စစ်ကြည့်တော့ ဘာမှမရှိတော့ဘူး...။ ဒါပေမယ့် ကျန်ခဲ့တာကတော့ Right Click နှိပ်လိုက်တိုင်း Preparing to Install ဆိုတာကြီး ပေါ် ပေါ်လာတယ်...။ process ထဲ၀င်ကြည့်တော့ ဘာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရဘူး... ဖျောက်ချင်လို့ System Restore လုပ်မလို့ကြံတော့ failure ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်...ခုဆို ပိုဆိုးလာတာက Shut Down လုပ်လိုက်ရင် မပိတ်ပဲနဲ့ ပြန်ပြန်တက်လာတယ်... Shut down လုပ်ပါတယ်ဆိုမှ Restart နဲ့တင်လည်လည်နေတယ်...။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ... ကူညီကြပါ..။
kaungkimpyar wrote: »
စက်မှာ virus ကိုက်နေတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်... Avg antispyware နဲ့စစ်ကြည့်လိုက်တော့ အကြီးစား လေးကောင်တွေ့လိုက်ရတယ်..... ကူညီကြပါ..။
အကြီးစား လေးကောင်ဆိုတာ ဘာကောင်တွေမို့လို့လဲ.. ဘာနဲ့ သတ်လိုက်တာလဲ.. ဘယ်လိုသတ်လိုက်တာလဲ...။
အကြီးစား လေးကောင်တဲ့... ပိုးဟတ်လောက်ရှိလား... :D
right-click မှာ Preparing to install ပေါ်တယ်.. Shutdown ရင်လဲ ပြန်ပြန်တက်တယ်... system restore လည်းမရ..
အင်း.. ဦးနှောက်ခြောက် မခံချင်ရင်တော့ Repair စမ်းကြည့်ပါဦး...:)
အဲဒါနဲ့မရသေးရင် registry mechanic လိုဆော့ဝဲလ်မျိုးနဲ့စမ်းကြည့်ပါလားဗျ။
ကိုညမီးအိမ်တို့ကတော့ အစုအဆောင်းတော်တယ်.. စနစ်တကျလဲစုထားတတ်တယ်.. ကျနော်တို့များ ဟုတ်ပေါင်.. လိုက်ရှာရပြီ.. လုပ်ချင်ရင်.. ဒီမှာပြန်ပြောချင်ရင်... :d
ကိုညမီးအိမ်ရဲ့ အကျင့်ကောင်းလေး အတုယူရဦးမယ်...
အဲလောက်ကြီးမြှောက်နဲ့လေ မနေတတ်တော့ဘူး။ :d:d:d
ဒါကြီးနဲ့ သတ်တာ... ဒီအကောင်တွေကို တွေ့တာ... ခုတော့ သိပ်မဆိုးတော့ဘူး...Antivirus က Symantec Coorporate သုံးထားပါတယ်ခင်ဗျာ...အခု Right Click နှိပ်လိုက်ရင်မပေါ်တော့ဘူး...ဒါပေမယ့် Window+E နှိပ်လိုက်ရင် အဲ့ Preparing To Install ဆိုတာကြီး ပေါ်လာတယ်ဗျ... သုံးတာတော့စုံနေပြီ Spy Emergency ကော... အစုံပဲ... Repair မလုပ်ချင်ဘူး System Restore လည်း လုပ်လို့မရဘူးလေ...ကူကြပါဦးဗျာ
kaungkimpyar ခင်ဗျ ကျွန်တော်ပေးထားတာလေးနဲ့ရောမစမ်းရသေးဘူးထင်တယ်။ စမ်းကြည့်ပါဦး။
Clean window reinstall is the best answer to solve your problem.
ဟုတ်ကဲ့..အစ်ကို..အစ်ကိုစေတနာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..အစ်ကိုပေးတာလေးကိုလည်း သုံးကြည့်ပါတယ်...။ အဆင်ပြေသွားတာတော့ ဘာနဲ့ အဆင်ပြေသွားလဲမသိဘူး... Spy Emergencey လည်းသုံးတယ်..အစ်ကိုပေးတာလည်းသုံးတယ်...ခုတော့ သိပ်မဆိုးတော့ဘူး.. ဒါပေမယ့် အားနေရင် Anti Virus နဲ့ Anti Spyware အမြဲ Run ထားတယ်လေ.. စိတ်သိပ်မချရလို့ပါခင်ဗျာ... MZ မှ ကူညီကြသော အစ်ကိုအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.. နောက်လည်းကူညီကြဦးနော်ဗျ...။